Akhriso: Magacyada afartii xildhibaan ee Golaha Shacabka ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo – Kalfadhi
Afar xildhibaan ayaa maanta kusoo baxday doorashadii baarlamaanka 11-aad ee Golaha Shacabka ee ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Doorashada kursiga sumadiisu ay tahay HOP103 oo horay guddiga doorashada heer federal ay hakiyeen doorashadiisa ayaa kamid ahaa kuraastii la doortay, waxaana kursigan cabasho la xiriirta habraaciisa keenay guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Kursigii koowaad ee doorashada waxaa uu ahaa HOP103:
Kursigan waxaa ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo ah wasiirka howlaha guud iyo guryeynta maamulka Koonfur Galbeed oo helay codad dhan 78, halka musharraxii la tartamayey ee Mukhtar Cali Ibraahim uu heley 18 cod, halka 4 cod ay xumaatay.
Kursigii labaad ee doorashada waxaa uu ahaa HOP189:
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), oo kursigaan horay ugu fadhiyay ayaa mar kale loo doortay kaddib markii uu ka guuleystay Xasan Cali Maxamed.
Mudane Madoobe ayaa helay 63 cod, halka musharraxii la tartamayay uu helay uu helay 11 cod.
Kursigii saddexaad ee doorashada waxaa uu ahaa HOP042:
Doorashada kursigan waxaa ku guuleystay Cabdirisaaq Xaaji Cabdi (Midnimo) oo helay 80 cod, halka musharraxii la tartamayay ee Maxamed Cali Sheekh uu helay 15 cod.
Kursigii afaraad ee doorashada waxaa uu ahaa HOP041:
Kursigan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee doorashadii maanta waxaa ku guuleysatay Nuura Mustaf Muqtaar, oo heshay 83 cod, halka Muno Aadan Maxamed ay iyadana heshay 15 cod. Kursigan ayaa waxaa uu kamid ahaa kuraastii loo xiray haweenka.
Afartii sannadood ee lasoo dhaafay kursigan waxaa ku fadhiyay Idiris Cabdi Dhaqtar.